Trump oo sheegay in uu taageersan yahay jirdilka - BBC Somali
Trump oo sheegay in uu taageersan yahay jirdilka
Trump ayaa warbaahinta ABC News u sheegay in uu la tashandoono xoghayaha arrimaha difaaca James Mattis iyo madaxa sirdoonka Mike Pompeo oo uu waydiin doono si sharciga waafaqsan oo ay ula dagaalami karaaan xagjirnimada.
Madaxwaynuhu wuxuu sheegay in xagjirku ay dadka madaxa kaga jaraan bariga dhexe.
Si kastaba ha ahaatee madaxii hore ee sirdoonka Maraykanka ayaa sheegay in ay "khalad wayn tahay in talaabo dib loogu qaado" jirdilka.
Trump ayaa sheegay in uu doonayo in uu dalkoodu ammaan noqdo.
"Markay dadka tooganayaan, markay dadkanaga iyo dadka kalaba madaxa ka goynayaan, markay dadka madaxa uga jarayaan in ay yihiin kiristaan Bariga Dhexe ku nool, marka kooxda isku magacawda Dawladda Islaamku ay samaynayso waxyaabo aan cidina maqal tan iyo qarnigii 15-naad, miyaana si wayn u dareemaynin in aa naan dadka biyo ku hafiyo?" ayuu yiri.
Biyo ku hafinta ayaa ah nooc ciqaab ah oo qofka biyo wajiga lagaga shubo.
"Waxaan la hadlay dadka ugu sareeya arrimaha mukhaabaraadka waxaana waydiiyay su'aasha ah, 'arrintani ma shaqaysaa, jirdilku ma shaqeeyaa?' jawaabtuna waxay noqotay 'haa dabcan'. Ayuu yiri Trump.
Hadalka isaga oo sii wada ayuu yiri "dadkay kurka ka jaraan markaasay kaameerada ka duubaan waxayna gaarsiiyaan adduunka oo dhan. Arrintaas ayaan aragnaa haddana nalooma ogola in aan wax samayno?.
"Waxaan ku tiirsanaan doonaa xoghayaha arrimaha difaaca iyo madax sirdoonka haddaysan rabin jirdilka dhib malaha, haddiise ay rabaan in ay sidaas sameeyaan waan kala shaqayn.
"Waxaan rabaa in aan sameeyo wax kaste oo sharcigu ogol yahay laakiin miyaan dareemayaa in arrintani waxtar leedahay? Aad baan u dareemayaa in ay waxtar leedahay.